Betrayal 3D – Imposter Hunt Cheats&Kugura – Android Cheats Matipi
Betrayal 3D – Imposter Hunt Cheats&Kugura
Kutengesa 3D - Ndiani ane dhiabhori mukati? 👺
Kusimudzira mamwe madhiyabhorosi ekutamba ekutamba anonakidza? Joinha chiitiko chinonakidza munyika yekuvhima-kana-kuvhimwa yeBetrayal 3D, kwaunoshandura mabasa pakati paDhiyabhorosi neMudziviriri.
👹 Kana uri Dhiyabhorosi, basa rako nderekutora mamwe mavara ese pasina kubatwa: shandisa hunyengeri hwako uye hunyanzvi hwemhondi kuverevedza pane hunhu hwega hwega uye uvauraye pasina ari kutarisa., wobva wanzvenga kuonekwa uku timer ichidzika.
👮 Semudziviriri, iwe unozoda masimba ako ese ekuona uye kuderedzwa kuti ubate mhondi isati yawana mukana wekukuuraya iwe nevamwe vese vasina mhosva vakamira - kunze kwekunge wavabata muchiito., hauzomboziva kuti ndiani ane dhiyabhorosi mukati!
MADZIMAI NEVAMUNHU, PAKATI PADU PANE MHONDI... 🕵️‍♂️
★ Uri kudivi ripi? Matambudziko upenyu kana rufu, asi iwe unosvika pakusarudza kuti uri kudivi rengirozi here kana kuti ungabva wapara mhosva dzakaipa mumutambo uyu uri nyore kutamba asi unokurumidza uye usingaperi unonakidza..
★ Enda kune spree - nekupfuura 120 mazinga akasiyana ekutamba, iyo 🔪 mhondi, bongozozo uye chiito 🔥 hachipere. Sezvaunofambira mberi kuburikidza nemutambo, nzvimbo dzinowedzera kukura uye kuwedzera labyrinthine, uye nhamba yemavara inokura uye ichikura, zvichiita kuti zvinyanye kuoma kudzivirira magumo ane hutsinye kana-kana uriwe urikupedza hutsinye-kutiza usingaonekwi.
★ Master of disguises - mazinga akazara ekufambira mberi kuburikidza nemutambo uye kuwana mibairo kusanganisira 38 akasiyana hunhu matehwe anomiririra mafaro chakavanzika bhaisikopo archetypes, pamwe nenzvimbo itsva dzinoyevedza uye mu-mutambo mari.
★ Dhiabhorosi maitiro - mitemo yakananga, asi mutambo wacho unogara uchikwidziridzwa nemakanika matsva, kusanganisira kusvetuka mapedhi anobatsira maProtectors kumhanya kunzvimbo yemhosva, Vents inobvumira mhondi 🥷 kufamba kubva pane imwe imba kuenda kune imwe imba nekubira kwekupedzisira, magonhi akakiiwa, uye CCTV makamera anogona kuona zvakananga kuburikidza nekuvanza kwengirozi.
★ All the best tunes - Betrayal 3D inozvirumbidza madhizaini anonakidza uye ruzha rwemhondi rwunopinda panguva dzekunetsana kukuru kuti uwedzere chiitiko uye chiitiko chako chemutambo..
ZVAKAPINDA NADHABHURI MARI MAU?
Unoda mafaro ese ekuve ari maviri mutikitivha uye arch assassin? Kutsvaga mutambo unopa kuruma-saizi chunks yekunakidzwa uye adrenaline? Wakagadzirira kutamba mativi ose emutemo? Kuda kuyedza hunyanzvi hwako hwekunyeba uye zano?
Dhawunirodha Betrayal 3D izvozvi uye nyura munyika ine ruzha yehumhondi, kutengesa, uye dhiyabhorosi kunakidzwa kwakanaka.
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: Betrayal, CheatsHack, Hunt, Imposter
← Vanotya Mudzidzisi: Chikoro Kutiza – Kubiridzira&Kugura Vaputse – Kubiridzira&Kugura →
Epic Hondo: Zvigaro zvoumambo – Kubiridzira&Kugura
POKOPOKO The Match 3 Puzzle Kubiridzira&Kugura
Zvikara & Puzzles: Kumuka – Kubiridzira&Kugura
Sango Island : Relaxing Game Cheats&Kugura